DATIM-PIFIDIANANA BEN’NY TANANA : Hamoaka ny fanapahan-keviny ny governemanta
Handray fanapahan-kevitra mahakasika fotoana hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna ny governemanta, araka ny nambaran’ny Filoha Andry Rajoelina. Amin’ity herinandro ity na ny herinandro ho avy io no ahafantarana ny daty raikitra hanaovana izany ny fifidianana izany. 7 août 2019
Tolo-kevitra ihany no nomen’ny Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni) ho an’ny tetiandro hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna fa an’ny fitondram-panjakana mahefa ny fanapahan-kevitra farany. Ny faran’ny volana jolay teo anefa no niandrasana ny didim-panjakana mamaritra ny hanaovana na tsia ny fifidianana kaominaly araka ilay daty natolotry ny Ceni saingy tsy namoaka izany hatreto ny fahefana mpanatanteraka.
Araka ny fanazavana noentin’ny Filoha Andry Rajoelina omaly dia hiroso amin’ny fandinihana ny fiatrehana izay fifidianana ben’ny tanàna izay ny governemanta ary aorian’izay dia hisy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy horaisina. Mifamaofao be ihany hatreto ny zava-misy satria misy amin’ireo antoko politika no mandrahona tsy handray anjara amin’ny fifidianana raha tsy asiam-panitsiana ny lisi-pifidianana. Ankilany anefa ny Ceni dia milaza fa fanarenana ny lisitra ihany no azo atao fa tsy tratra intsony ny fanaovana fanavaozana.
Manoloana ireo rehetra ireo dia nanambara ny Filoha fa misy ny rafitra napetraka ho tompon’andraikitra voalohany amin’ny fikarakarana ny fifidianana ary misy ny lalàna natao hifehy ny fifidianana natao hankatoavina sy tsy maintsy arahina. Ny fanarahan-dalàna ihany, hoy izy, no zava-dehibe amin’ny fanatanterahana ny fifidianana. Vonona ny hifampidinika amin’ireo hery velona mikarakara ny fifidianana ny tenany mba hahafahana miroso amin’ny fiatrehana ny fifidianana kaominaly. “Mikasika ny fifidianana ben’ny tanàna dia ny Ceni no mamaritra ny daty tokony hanaovana ny fifidianana.
Ny antsika dia zavatra manara-dalàna no tokony hatao, rehefa tokony hatao ny fifidianana dia atao. Hisy ny filan-kevitry ny minisitra, hanontany ny Ceni ny tenako ary hanontany ihany koa ny Minisitry ny atitany mikasika ny hoe, afaka miroso marina amin’ny fifidianana ben’ny tanàna ve isika ? Hanontany ihany koa aho an’ireo antoko izay milaza fa tsy tokony hatao ny fifidianana ben’ny tanana.”, hoy ny Filoha Andry Rajoelina. Ho fantatra amin’ ity herinandro ity na amin’ny herinandro ho avy izay daty raikitra hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tanàna manerana ny Nosy. “Hisy ny fanapahan-kevitra amin’ity herinandro ity na amin’ny herinandro ho avy. Amin’ny filan-kevitry ny minisitra tsy maintsy manapa-kevitra mikasika ny fotoana tokony hanaovana izay fifidianana ben’ny tanana izay”, hoy izy nanohy.